Nagu saabsan – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Yaan nahay,Siddeen Uhowl-galaa,Maxaan Soo Gudbinnaa,Xaggeense kasoo Tebinaa ?
Shabakadda War-baahinta ee Feer-feer Media Network,Waa :-Mareeg madax banaan oo soo tebisa warar iyo macluumaad dhamaystiran oo dheelitiran islamarkaana ku dhisan xaqiiqo iyo xog-ogaalnimo,kana fog been iyo buun-buunin toona.Ujeedadeeda koowaad waa sidii ay guud ahaan bulshada soomaaliyeed ugusoo gudbin lahayd wararka iyo macluumaad kala duduwan ee ka dhacaya dhulkooda kuna saabsan dadkooda iyo Diintooda.
Waxa ay kasoo warantaa dhammaanba dhulalka ay Soomaalidu degto iyada oo aanan u eegaynin siyaasada iyo maamulka halkaasi kajira.Muhimmadeeda ayaana ah in ay usoo tebiso waxkasta oo kadhaca meel walba oo ay dad Soomaaliyeed joogaan si ku dhisan Sinnaan iyo dhex-dhexaadnimo salka ku haaysa mabaadii’da shareecada Islaamka iyo Qaanuunka caalamiga ah ee udegsan Saxaafada.waxa ayna leedahay shuruudo iyo Xeerar ugaar ah oo ay wax ku go’aamiso.
Waa shabakad loo wada simanyahay oo qof walbaahi xaq usiinaysa inuu kusoo bandhigo waxkasta oo aan ka hor imaanayn Shareecada islaamka iyo Dhaqanka suuban ee soomaalida.Waxa ayna akhristayaashu fursad usiinaysaa in ay usoo gudbiyaan fikradooda iyo fahamkooda saliimka.Sidoo kale waxa ay shabakadani soo dhawaynaysaa wax kasta oo dhaliil ama dhiira gelin ah.
Waxii faah-faahin ah ee intaas dheer waxa aad kala xidhiidhi kartaa maamulka guud ee Shabakadan Cinwaanka ah:-Tifaftirahaguud@gmail.com.